Naya Post Nepal | किन गइन् बैंकको बाथरुममा नर्स अनुपमा ? कसरी भयो रहस्यमय मृ”त्यु !
किन गइन् बैंकको बाथरुममा नर्स अनुपमा ? कसरी भयो रहस्यमय मृ”त्यु !
सिटिजन्स बैंक जुम्लाको बाथरुपमा नुहाउँदै गर्दा बेहोस भएकी एकजना नर्सको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्र’तिष्ठान शिक्षण अस्प ताल जुम्लामा उपचारका क्रममा मृ”त्यु भएको छ।
बिहीबार दिउँसो सिटिजन बैंकको बाथरुममा नु’हाउन गएकी अनुपमा बे होस
कोलपुर उपमहानगर नगरपालिका ११ की २६ वर्षीया अनुपमा श्रेष्ठ को कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृ”त्यु भ एको हो। मृ’तक श्रेष्ठ बिहीबार दिउँसो सिटिजन बैंकको बाथरुममा नुहाउन गएकी थिइन्। बाथरुममा नुहाउन गएकी अनुपमा बे’होस भ एको भन्दै सिटिजन्स बैंकका कर्मचारीले उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्र’तिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा लगिएको थि यो।
उनलाई आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको भएपनि बचाउन नसकि एको चिकित्सकहरु बताउँछन् । २४ घण्टासम्म आइसियुमा राख्दा पनि होसमा आउन नसकेपछि चिकित्सकको टोलीले शुक्रबार साँझ मृ त घो”षणा गरेको थियो। अनुपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्र’ति ष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको स्टाफ न’र्स हुन्।
बे होस अवस्थामा ल्याइएको र पछि मुटुको ध”ड्कन फिर्ता
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक यौवन चौधरीले उपचारका क्रममा अनुपमाको मृ”त्यु भएको बताए। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्र’तिष्ठानका प्रवक्ता तथा डीन डाक्टर रमेश भट्टराई अनुसार बे’होस अवस्थामा ल्याइएको र पछि मुटुको ध’ड्कन फिर्ता आएको थियो।
यता सिटिजन्स बैंकका म्यानेजर महेश शाहीले अनुपमा श्रेष्ठ साथी को बहिनी भएको र लामो समयदेखि चि’नजान भएकोले बा’थरुप मा नुहाउन आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बेहोस भएर ढ’लेपछि बाथरुमको ढो’का फो’डेर अस्पताल लगिएको उनले बताए। ‘हामी अफिसमै भएको समयमा घटना भएको थियो। बैंकमा गार्ड, से’वाग्रा ही र कर्मचारी पनि थियौँ,’ उनले भने।
आफन्तजन जुम्ला पुगेर छोरीको घ’टना र”हस्यमय भएकोले प्रहरीमा जा’हेरी दिने तयारी
घ’टनाको अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुपमाको आफन्तजन जुम्ला पुगेर छोरीको घ’टना र’हस्यमय भएकोले प्रहरी मा जा’हेरी दिने तयारीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले प्रहरीले का’ नुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अ’नुसन्धान अघि बढाउने ब’ताए।
‘मृ तकका आफन्त आइपुगेका छन्,’ उनले भने,‘उनीहरुको जाहेरी अनुसार प्रहरीले अ’नुसन्धान अघि बढाउँछ। ’कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञा न प्र”तिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका उपकुलपति डा. मंगल राव लले कर्णाली अस्पतालले एक जना हो’नाहार स्वास्थ्यकर्मी गु’माए को भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्।
२०७८ पुष १५, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 199 Views